Bahamas Ministry of Tourism & Aviation nkwupụta na emelitere Ule ogbugba ndu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas Ministry of Tourism & Aviation nkwupụta na emelitere Ule ogbugba ndu
Aviation • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Ịtụ egwu • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Safety • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem
Dị ka akụkụ nke mbọ Bahamas na-aga n'ihu na-enye ahụmịhe agwaetiti dị mma na ahụike ka onye ọ bụla nwee ọ enjoyụ, ekwuputala ihe nnwale ọhụrụ maka ndị na-achọ Visa Ahụike Njem Bahamas ịbanye Bahamas ma ọ bụ ime njem n'etiti agwaetiti n'ime Bahamas.
A ga-achọ ndị njem niile gbara ọgwụ mgbochi ọrịa ka ha nweta ule COVID-19 na-adịghị mma were ụbọchị ise (5) tupu ụbọchị mbata na Bahamas.
Otu ule a na-emetụta maka njem n'etiti agwaetiti n'ime Bahamas.
Ndị ọbịa na njem ụgbọ mmiri sitere na ịlaghachi na Bahamas ka ga -etinye akwụkwọ maka Visa Ahụike Njem Bahamas wee soro ihe nnwale ọhụrụ maka ndị ọgwụ mgbochi na ndị na -agbabeghị ọgwụ.
Site na Fraịdee, Ọgọst 6, 2021, usoro iwu ndị a ga -amalite:
Ịbanye Bahamas site na mba ndị ọzọ:
• Ndị njem niile nwere ọgwụ mgbochi ọrịa niile, yana ụmụaka gbara afọ 2-11, ga-enweta nnwale COVID-19 na-adịghị mma (ma ọ bụ ule ngwa ngwa antigen ma ọ bụ ule PCR), were ihe na-erughị ụbọchị ise (5) tupu ụbọchị mbata na Bahamas.
• Ndị njem gbara ọgwụ mgbochi ọrịa dị afọ 12 gbagoe ka ga-enwerịrị ule COVID-19 PCR na-adịghị mma were ụbọchị ise tupu ụbọchị mbata.
• A gụpụrụ ụmụaka niile nọ n'okpuru afọ 2 n'ihe nlele ọ bụla.
Njem Inter-Island n'ime Bahamas site n'agwaetiti ndị a: Nassau & Paradise Island, Grand Bahama, Bimini, Exuma, Abaco na North na South Eleuthera, gụnyere agwaetiti Harbor:
• Ndị niile gbara ọgwụ mgbochi ọrịa, yana ụmụaka dị afọ 2-11, na-achọ ime njem n'ime Bahamas ga-achọ inweta nnwale COVID-19 na-adịghị mma (ma ọ bụ ule ngwa ngwa ma ọ bụ ule PCR), ewereghị ihe karịrị ise ( 5) ụbọchị tupu ụbọchị njem.
• Ndị mmadụ gbara ọgwụ mgbochi afọ 12 na karịa ga-enwerịrị nnwale COVID-19 PCR na-adịghị mma were ụbọchị ise tupu ụbọchị njem.